I-Captains Spa Suite - I-Airbnb
I-Captains Spa Suite
* Isici - ungene emzileni
* I-TV yedijithali engu-17 inch
*Amaphuzu omehluko: I-spa ensuite, Indawo yomlilo yamalahle egesi ekamelweni namakhandlela eziko endlini yokugezela, Iphansi lezinkuni, umata wasePheresiya. . Iwindi eligcwele + 2 amafasitela ane-arched anokukhanya okuholela, Uphahla oluphezulu.
Jabulela okokuzithokozisa ‘kwasekhaya okunethezekile nokunethezekile‘ endaweni yethu yokuhlala yesitayela se-boutique – amamitha angu- nje ukusuka emanzini, izikebhe, izitolo kanye nezindawo zokudlela. Jabulela indawo yokuphumula yesivakashi esitezi esiphezulu ngetiye, ikhofi namaqebelengwane. Isilinganiso sihlanganisa isidlo sasekuseni esiphekiwe esiphekiwe ngemva kuka-7:30 ekuseni noma isidlo sasekuseni esiziphakelayo ngaphambi kuka-7: 30.
I-Williamstown iyichweba elinomlando elise-peninsula encane enokubukwa okujabulisayo kwedolobha kanye nePort Phillip Bay.
Indawo yokwamukela izivakashi e-B&B ivuliwe kusuka ngo-7: 30am-9pm futhi kuhlale kukhona umbungazi osebenzayo e-B&B, uma kukhona isimo esiphuthumayo kunoma iyiphi indawo yethu yokuhlala - kungakhathaliseki ukuthi ku-B&B noma kwelinye lamafulethi noma izindlwana.
Indawo yokwamukela izivakashi e-B&B ivuliwe kusuka ngo-7: 30am-9pm futhi kuhlale kukhona umbungazi osebenzayo e-B&B, uma kukhona isimo esiphuthumayo kunoma iyiphi indawo yethu yoku…